နားခိုရာ: September 2007
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက ရုံးမသွားဖြစ်ဘူး။ နှာတွေစီးပြီး ခေါင်းတွေအရမ်းကိုက်နေလို့ ဆေးသောက်ပြီး အိမ်မှာပဲနားနေဖြစ်တယ်။ မိုးတွေကလည်း တအားရွာနေတယ်လေ။ နေ့လည်ပိုင်းလောက်ကြတော့ နည်းနည်းသက်သာလာတော့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ၀ယ်ထားပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့ အခွေတွေကို လျှောက်ဖွနေမိတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခွေရွေးပြီး စကြည့်ဖြစ်တယ်။ Flag of our Fathers ဆိုတဲ့ စစ်ကားလေးပါ။ ကလင့်အိစ၀ုဒ်ရိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြိးခါနီး အမေရိကန်က ဂျပန်ရဲ့ Home Islandတွေထဲက တစ်ခုကို စတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းပါ။ ဂျပန်ကျွန်းတွေကို ၀င်သိမ်းဖြစ်ခဲ့ရင် စစ်ရေးအရ အချက်အချာဖြစ်တဲ့ ဒီကျွန်းကို သိမ်းမှဖြစ်မှာလေ။
လေကြောင်းက အကြီးအကျယ်ဗုံးမိုးတွေရွာ ပြီးတော့ စစ်သင်္ဘောတွေပေါ်ကနေ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ စိန်ပြေနပြေ ပစ်ခတ်ပြီးမှ ကျွန်းပေါ်တက်သိမ်းကြတာပါ။ အမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဂျပန်တွေ စိစိညက်ညက်ကြေနေလောက်ပြေီပေါ့။ သူတို့မသိလိုက်တာက ကျွန်းရဲ့အမြင့်ပိုင်း စူရီဘာချီတောင်ပေါ်က တူးထားတဲ့ လှိုဏ်ဂူခံတပ်တွေထဲက သူတို့ကို ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ဂျပန်တပ်သားတွေပါပဲ။ ကမ်းခြေကို အမေရိကန်တပ်သားတွေ ဖွေးနေအောင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်လောက်မှာ ဂျပန်က စတိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေသေလိုက်ကြတာမှ သောက်သောက်လဲပဲ။
လေးရက်မြောက်မှာ စူနာဘာချီတောင်ကို တက်သိမ်းပြီး အလံစိုက်ပါတယ်။ အင်မတန် နံမည်ကြီးသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလံစိုက်နေတဲ့ပုံက ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ထားတာပါ။ ပထမစိုက်ခဲ့တဲ့အလံကို Navy Secretary ကအမှတ်တရလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်စိုက်ရင်း ဓါတ်ပုံကိုပါဆင်ပြီးရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒီဓါတ်ပုံဟာ အမေရိကားက သတင်းစာတွေမှာ မျက်နှာဖုံးမှာပါလာပါတယ်။ စစ်ဒါဏ်နဲ့ နွမ်းနယ် ငြီးငွေ့နေတဲ့ ပြည်သူကို တစ်ဖက်လှည့် နှစ်သိမ့်ပေးတာပါ။ အဲဒီကျွန်းကို ရက်လေးဆယ်လောက်တိုက်လိုက်ရပါတယ်။ အနုမြူဗုံးကြဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အထဲမှာ ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်လဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကျွန်းလေးကိုတောင် ဒီလောက်သိမ်းနေရရင် ဂျပန် ပင်မကျွန်းတွေကို တက်သိမ်းရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မမှန်းရဲတော့ဘူး။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးက သူရဲကောင်းဆိုတာကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ဖန်တီးယူရတယ်တဲ့ .... အလံစိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ မသေပဲကျန်ခဲ့တဲ့ သုံးယောက်ကို အမေရိကား ပြန်ခေါ်ပြီး အကြီးအကျယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလဲ စစ်စရိတ်တွေနဲ့ ငွေကျပ်တည်းနေတဲ့ အစိုးရပြေလည်စေကြောင်း အဲဒီသူရဲကောင်းသုံးယောက်ကို အရင်းပြုလို့ war bonds တွေရောင်းပါတယ်။ လုပ်သွားတဲ့အကွက်ကလေးတွေက တကယ်ကိုလှပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ဆိုတာ အချိန်အခါ နေရာဒေသမရွေး ရှိပါလားဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုပေါက်သွားတယ်။
Flag of our Fathers ကြည့်ပြီးတော့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Letters from Iwo Jima ကို ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပဲ ဂျပန်ဖက်ကပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ကျွန်းမှာတာဝန်ကျတဲ့ ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ် Kuribayashi က ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ကျွန်းကို လမ်းလျှောက်ပြီး လှည့်ပတ်ကြည့်ပါတယ်။ သဲသောင်ပြင်မှာ ကတုတ်ကျွင်းတူးနေတဲ့ အဖွဲ့ကို ရပ်ခိုင်းပါတယ်။ အမေရိကန်ကို ဒါလောက်နဲ့ ခုခံလို့မရဘူးတဲ့။ သူက အမေရိကားကိုလဲရောက်ဖူးတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ Technology တွေကိုလဲသိတယ်လေ။ သုံးလေးရက် လျှောက်လေ့လာပြီး အမြင့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ စူနာဘာချီတောင်မှာ ကျောက်လှိုဏ်ဂူတွေထွင်းခိုင်းပြီး လက်နက်ကြီးတွေကို ရွှေ့တင်စေပါတယ်။ ဂျပန်ပြည်မက အကူအညီထပ်မရတော့ဘူး။ ရှိတဲ့လူ လက်နက်နဲ့ အမေရိကန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်ဆွဲခုခံဖို့ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးတာဝန်ပဲဆိုတာကို သဘောပေါက်ထားပုံရတယ်။ နောက်ဆုံး ရှိတဲ့ လက်နက် လူအင်အားနဲ့ ရက်လေးဆယ် ခုခံသွားတယ်။
အခုဒီအကြောင်းပြန်ရေးရင်းတွေးနေမိတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေပါ။ ဂျပန်တွေ သေကုန်ရောပေါ့ဆိုတဲံ အတွေးနဲ့ ကမ်းတက်လာတဲ့ အမေရိကန်တွေကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အသင့် ချိန်ရွယ်ထားပြီး ကမ်းလုံးပြည့်အောင် ဂျပန်တွေစောင့်နေသလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့ တွေးနေမိတယ်။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကတည်းက နေတောက်လျှောက် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းလာတာဆိုတော့ စာလည်းတော်တော်တတ်နေပြီလေ။ ဒီဖက်ကလူတွေ ဟုတ်ပြီကွဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တစ်ဖက်က ဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးသလို ကျားထိုးတဲ့ဆီမှာလို နှစ်ကောင်စားပြီး ကင်းပေါက်ရိုက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အကွက်မျိုးများ ရှိနိုင်မလားလို့ အမျိုးမျိုး လှည့်တွေးနေမိတယ်။
အခုရန်ကုန်မှာ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ ဇတ်လမ်းတွဲအသစ်တွေကြည့်နေရတယ်။ တစ်ခွေ တစ်ထောင့်လေးရာ ထောင့်ငါးရာလောက်ဆိုတော့ ပစ်စလက်ခတ်ကို တန်ပါတယ်။ အခုတလော Series တွေပဲဝယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဆက်တိုက်ကြည့်မိလို့ အိပ်ရေးတောင်အတော်ပျက်နေပြီ်။ ငှားကြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဒီလိုပဲဖြစ်ကြတယ်။ :D ၀ယ်ပြီးတော့ မြည်းရုံသာ မြည်းကြည့်ပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့ဇာတ်လမ်းအတွဲတွေလဲအများကြီးပဲ။
Hero - လူ့မျိုးရိုးဗီဇတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး အရင်ကမရဘူးမရှိဘူးတဲ့ super power တွေရလာတဲ့ လူတစ်စုအကြောင်း.... လေထဲပျံနိုင်တဲ့ နေသန်၊ ဘယ်လိုဒဏ်ရာရရ Heal ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ cheer leader ကလဲရာ၊ အနာဂါတ်ကာလက အဖြစ်အပျက်တွေကို မသိစိတ်နဲ့ ပန်းချီတွေဆွဲတဲ့ပန်းချီဆရာ၊ ဒီလူစုအကြောင်းကို သုသေသနပြုတဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပညာရှင်ဒေါက်တာကြီးနဲ့ သူ့အဖေအကြောင်းစုံစမ်းဖို့အမေရိကားရောက်လာတဲ့သူသား ...... စသည် စသည်ဖြင့် ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် မထပဲကြည့်ချင်သွားလောက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Prison Break 1,2- သေဒဏ်ကြနေတဲ့ အကိုကိုကယ်ဖို့ ရှာကြံအမှုလုပ်ပြီး ထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့structural engineer လေး စကိုးဖီလ်း ၊ အမျိုးသမီး ဒုသမတ၊ ထောင်ဆရာဝန်မလေး၊ ထောင်မှူးကြီးနဲ့ သူ့ရဲ့လက်ထောက်၊ စကိုးဖီးလ်နဲ့အတူထောင်ဖောက်ပြေးကြမဲ့ ဘ၀စုံက ထောင်သားတစ်စု ...... (စာတန်းမှန်တယ်) အခုထိ ၀ယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ DVD ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ဒါကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
Unit - Delta Forceလိုအထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ (ဥပမာ လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲတာကိုဝင်ကယ်တာ) ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဘ၀တွေ .... (အင်္ဂလိပ်စာမထိုးဘူး) Season 1 ပဲရသေးတယ်။ Season2တစ်သုတ်ရန်ကုန်ကိုရောက်လာသေးတယ်တဲ့။ အခုတော့ ကုန်နေတယ်။
Criminal Minds - FBI ရဲ့ အဖွဲခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BAU (Behavioral Analysis Unit)ရဲ့ အမှုလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ၊ Crime Scene က သဲလွန်စတွေကိုကြည့်ပြီး အမှုကျူးလွန်သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် စိတ်နေသဘောထားတွေကို Analysis လုပ်ပြီး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြတာ။ Team Work နဲ့အလုပ်လုပ်တာသိပ်ကောင်းတယ်။ အလုပ်ခွဲဝေပုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပုံတွေ လက်တွေ့အလုပ်အတွက်တောင် အတုယူမိတာတွေရှိတယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် (တစ်ပိုင်းကို ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ... ခွဲကြည့်လို့ရတယ်) (စာတန်းမှားတယ် - စာတန်းမပါတော့ အတော့်ကို နားစိုက်ထောင်ရတယ်။)
Without Trace - FBI ရဲ့ လူပျောက်ရှာတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ (တစ်ပိုင်းကို ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ... ခွဲကြည့်လို့ရတယ်) သူလဲ Criminal Minds လိုပဲ အဖွဲ့လိုက်အလုပ်လုပ်ကြပုံလေးကို လေ့လာာကြည့်လို့ရတယ်။ (စာတန်းမှန်တယ်)
Supernaturals - ထူးထူးဆန်းဆန်း သေသွားတဲ့မိခင်နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် .... သရဲကားလိုလို လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လိုလို ...ဂမ္ဘီရလိုလို. (အင်္ဂလိပ်စာ မထိုးဘူး) Amazonမှာ Second Season ကြော်ငြာထားပြီ။ အဲဒီမှာတွေ့ပြီးရင် မကြာခင်ပဲ ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာ သတိထားမိတယ်။ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေက အလုပ်လုပ်တာ သိပ်မြန်တာပဲ။
Lost 1, 2,3လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ကျွန်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားတဲ့ မသေပဲကျန်ခဲ့တဲ့ခရီးသည်တွေ ..... လူတွေရဲ့အကြောင်းကို တော်တော်သရုပ်ဖော်နိုင်တဲ့ကားပဲ. (စာတန်းမှန်တယ်)
24 Hours 1 to6Seanson တစ်ခုကို ဇာတ်လမ်းတစ်ခု။ သူ့ကို တုပြီးရိုက်ထားတဲ့ တရုတ်ကား မြ၀တီမှာ ပြဖူးတယ်။ Season1 ပဲကြည့်ရသေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာရောက်နေတယ်။ (စာတန်းမှန်တယ်။)
Posted by little moon at 11:49 AM No comments:
Posted by little moon at 12:51 PM No comments:
ပဲခူးမြို့နဲ့ ခြောက်မိုင် ခုနစ်မိုင်လောက်မှာရှိတဲ့ (ပဲခူးစစ်တောင်းတူးမြောင်းဘေးက) ရွာလေးပါ။ ပဲခူးကနေ သနပ်ပင်အထိကားနဲ့သွား အဲဒီကနေ မော်တော်အသေးလေးစီးသွားရင် လေးဆယ့်ငါးမိနစ် တနာရီပျော့ပျော့လောက် သွားရင်ရောက်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပွင့်လင်းရာသီဆိုရင် ပဲခူးရွှေမော်ဓေါဘုရားကြီး ခြေရင်း (ပဲခူးရန်ကုန် ကားတွေရပ်တဲ့ဂိတ်ပေါ့) ကနေ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ စီးသွားရင် မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ဆို ကျိုက်ပတိုင်ရွာကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ တူးမြောင်းကို ကူးတို့နဲ့ ကူးပြီး ကျိုက်ပတိုင် ရွာလေးကို သွားရတာပါ။ ဘုရားက ရွာလေးမှာပါ။ ကျိုက်ပတိုင် ရွာကြီးနဲ့ ရွာလေးကို ပဲခူးစစ်တောင်းတူးမြောင်းက ခြားထားပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ဘဲမွေး ဘဲဥရောင်းခြင်း၊ ပဲခူး ဆေးလိပ်ခုံများမှ ဆေးလိပ်ယူလိပ်ခြင်း တို့လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
ကိုးတောင်ပြည့်ဘုရားလေးက ပဲခူးစစ်တောင်း တူးမြောင်းကနေ လယ်တွေထဲရေပေးတဲ့ ချောင်းရိုးလေး ကမ်းပါးမှာပါ။ အဲဒီအတိုင်း မော်တော်နဲ့သွားရင် နိဗ္ဗန်တို့ ခမဲပြင်တို့ရောက်ပါတယ်။ ဘုရားကုန်းဟာ တစ်ချိန်က ဆင်ဖြူမွေးဖွားခဲ့ရာ အောင်မြေတစ်ခုလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ (သမိုင်းအထောက်အထား အခိုင်အမာတော့ မတွေ့ဖူးပါ) အထက်လမ်းစဉ်လိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦး တည်ထားခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း သားတပည့်အစဉ်အဆက် ဆက်လက်ပြီး လှူတန်းသာသနာပြကြလို့ အခုဆို ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ၊ ရဟန္တာပုံတော်တွေ၊ အခြားပုဂ္ဂိုတွေရဲ့ ရုပ်ထုတွေနဲ့ တော်တော်လေးကို စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဘုရားရဲ့ထောင့်လေးထောင့်မှာ တန်ဆောင်းတွေ ဆောက်လုပ်ထားတယ်။ အနောက်ဖက်က တန်ဆောင်း နဲ့ဆက်ရက် န၀င်းနှစ်ထပ် ဇရပ်လေးရှိပါတယ်။ အတွင်းက အုတ်ကာထားတဲ့ အပိုင်းက ကိုးပေပတ်လည်ပါ။ အပြင်ဖက်က ဆယ့်ရှစ်ပေပတ်လည်ပါ။ န၀င်းကိုက်အောင် ဆောက်လုပ်ထားတာလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
အောက်ကပုံက ဘုရားဘေးက ရွာရဲ့သောက်ရေကန်ကြီးပါ။ မိုးတွင်းမှာ စဉ့်အိုးကြီတွေနဲ့ မိုးရေကိုခံပြီး စုဆောင်းသုံးစွဲကြပေမဲ့ နွေရာသီ မှာတော့ သောက်ရေသုံးရေအတွက်ရွာတောင်ပိုင်းကလူတွေ အားထားသုံးစွဲရတဲ့ကန်ကြီးပေါ့။
ဘုရားဝင်းထဲမှာ နဂါရုံးဘုရား နဲ့ မတ်တပ်ဆင်းတုနှစ်ဆူရှိတယ်။ ရဟန္တာရုပ်တုတွေ (အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ အရှင်ဗာကုလ၊ အရှင်သီဝလိနဲ့ အရှင်ဥပဂုတ္တ) လည်းရှိတယ်။ နောက်ဆုံးတည်ထားတာက နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားတွေပါ။ နဂါးရုံဘုရားနဲ့ ရဟန္တာတွေရဲ့အနောက်ဖက်လေးမှာ ကိုးပေ ဆယ်ခန်းကျောင်းဆောင်နဲ့တည်ထားတာပါ။
ရဟန္တာရုပ်တုတွေ (အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ အရှင်ဗာကုလ၊ အရှင်သီဝလိနဲ့ အရှင်ဥပဂုတ္တ) လည်းရှိတယ်။
Posted by little moon at 12:34 PM 1 comment:
Posted by little moon at 5:29 PM 1 comment: